सौन्दर्य – Page3– rastriyakhabar.com
१. कालो रंग या हेना प्रयोग गरेको एक हप्तासम्म कपाल स्ट्रट गर्न ठीक होइन । यस्तो कपालमा स्ट्रेट नबस्ने मात्रै होइन कपाल नै ड्यामेज हुन सक्छ । हेना लगाएको कपालमा तीन महिना पछि मात्रै स्ट्रेट गर्न राम्रो हुन्छ । स्ट्रेट गरेपछि भने कपालमा रंग लगाउन सकिन्छ । २. हावाजस्तो उड्ने कपाल ( वेट नभएको) धेरै नरम कपाल छ..
तपाइँ कम सुत्नुहुन्छ ? सावधान मस्तिष्कमा हुन्छ खतरा
क्यानडाका वैज्ञानिकहरुले निन्द्राको कमीले मानिसमा पार्ने प्रभावबारे अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अध्ययन शुरु गरेका छन् । वेस्टर्न युनिभर्सिटी ओन्टारियोले विश्वमा जुनसुकै ठाउँमा रहेका मानिसहरुलाई अनलाइनमार्फत हुने परीक्षणमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । त्यसक्रममा विशेष रुपमा तयार पारिएका..
धेरै मान्छेलाई थाहा छैन कि चुम्बन गर्दा ब्याक्टेरियाको एउटा ठूलो समुह शरणार्थी बनेर दोस्रो व्यक्तिको मुखभित्र प्रवेश गर्छ भन्ने । तर वैज्ञानिकहरूले १० सेकेण्डको एक चुम्बनमा आठ करोड ब्याक्टेरिया एक अर्काको मुखमा ओहोर–दोहोर गर्ने तथ्य फेला पारेका छन् । यो कुनै अनुमान होइन, नेदरल्याण्डका..
युवतीले पुरुषका शरीरका यी ६ भागलाई आकर्षक देखे हुरुक्कै हुन्छन्
यूनिभर्सिटी अफ ब्रिटिश कोलम्बियाको एक अध्ययनको अनुसार, पुरुषको आँखाले महिलाहरूलाई सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्छ । ब्रिटेन र साउथ अफ्रिकाको तीन यूनिभर्सिटीजको अध्ययनमा पनि यस कुरामा रिसर्च गरिएको छ कि शरीरको कुन भागमा सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्छ । कित्सकका अनुसार, पहिलो प्रभाव नै अन्तिम..
हरेक मानिसको स्वभाव र रुची फरक फरक हुन्छ । मानिसले आफ्नो रुची अनुसार व्यवहार पनि भिन्न खालको देखाइरहेको हुन्छ । कसैलाई गुलाफ मन पर्छ त कसैलाई गुराँस । कुनै व्यक्ति गुलियोको पारखी हुन्छन् भने कोही अमिलो वा नुनिलोको । मानिसलाई स्वस्थ रहन यौन जीवनको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । मानसिक र शारिरीक रुपमा..
प्रधानमन्त्री केपी ओली को हुन ? ओलीको विगत यस्तो छः
काठमाडौँ। एमालेका अध्यक्ष केपी ओली मुलुकको ४१औँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनले पद तथा गोपनियाताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रिपति, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजनीतिक दलका शिर्ष नेता तथा विभिन्न कूटनीतिक नियोगका..
काठमाडौं । अनुहार फुस्रो हुने, चाया आउने, फुट्नेजस्ता समस्याले आम व्यक्तिलाई सताउने गर्छ । यस्तो समस्याको सिकार महिला तथा पुरुष दुवै हुने गरेको पाइन्छ । तर, खास तनावमा महिला नै हुन्छन् । छालालाई पर्याप्त पोषण दिने, अनुहारको फोहोर हटाउनेजस्ता काम गर्दा चाया हटेर चमक आउँछ । ब्युटिसियन हेनसन शाक्यले..
हुन त सबैले मुस्कुराएको राम्रै देखिन्छ तर अझ महिलाले मुस्कान छोडेको चाहिँ गजबै देखिन्छ । प्रसन्न हुँदा महिलाको गालामा लालिमा आउँछ र छालामा एकखाले चमक देखिन्छ । गाला हेरेर कुन महिला कस्ती हुन् बताउन सकिन्छ । जुन महिलाको दाहिने गालामा कालो कोठी छ, ती धनी, वैभवशाली र चरित्रवान हुन्छिन् । यस्ता महिलाले..
दुव्लो भएका युवा युवती विवाह पछि मोटाएका हामीले देखेका छौं। अझ साथी भाईहरुबीच त बिहेपछि त मोटाइस् नी भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरिएको सुनिन्छ। विवाहपछि किन मोटाउछन् त पातला मानिस यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। फेमिली सिस्टम एण्ड हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानका अनुसार विवाह पछि थुप्रै महिला र..
काठमाण्डौ । गोर्खा ब्रुअरीको सफल उत्पादन सोमर्सबीले भ्यालेन्टाइन डेको पूर्वसन्ध्यामा विशेष अभियान सुरु गरेको छ । सोमर्सबीले प्रेमिल जोडीहरुको भ्यालेन्टाइन डेलाई विशेष बनाउन विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ, जसका लागि फेस अफ सोमर्सबीको रुपमा गायक स्वप्न सुमन र मोडेल जस्मिन खड्का चयन भएका छन्..